Umuthi 'Lactulose ": analogs futhi impendulo kuyo
Imithi enegama ukuhweba "Lactulose", analogue yayo futhi esikhundleni basonta iqembu imithi elawula umsebenzi emathunjini. Muva nje, leli thuluzi kaningi elibekelwe iziguli izifo wamathumbu. Odokotela abaningi ukubika abasebenzi nokuvikeleka. Kulesi sihloko uzofunda ukuthi ukhuluma 'Lactulose "imiyalelo ukulungiselela ukusetshenziswa. Izidakamizwa analogue izokwethulwa ukunakwa kwakho ngezansi.
Kuyini lokhu imithi?
Izidakamizwa "Lactulose" analogue nama esikhundleni - ke laxatives. Ingqikithi asebenzayo we elinegama elifanayo cishe hhayi ugxile emathunjini. Yilokhu okubangelwa ukuphepha imithi.
I asebenzayo izidakamizwa - lactulose. Futhi e umkhiqizo iqukethe izingxenye ezengeziwe - galactose, lactose namanzi. Kuyaphawuleka ukuthi izidakamizwa analogs yasekuqaleni ingaqukatha izingxenye ezisebenza ubungako obuhlukahlukeneko.
Kusho "Lactulose" analogue nezidakamizwa esikhundleni abakwazi ukuba angena igazi. Zonke ngenxa yokuthi umuntu akanayo eziswini enzyme izidakamizwa esebenzayo. Umuthi usebenza esiswini. It kwandisa umthamo sezinyawo kusiza amanzi Push-udonse.
Ngenxa yalokho kuzichaya isifika yokucindezeleka okwandayo ebodeni wamathumbu. Umphumela ukuphela kwalesi algorithm nesifiso sokufuna ukubukeka azikhulula. Kufanele kuqashelwe ukuthi isenzo izidakamizwa futhi esikhundleni yayo abenzeki ngokuphazima kweso. Chair waphawula amahora 6-8 kuphela emva isicelo.
Yini esikhundleni ingxenye?
Njengezinye izidakamizwa eziningi, izidakamizwa has a "Lactulose" nozakwabo. Phakathi kwazo kunabafundi esikhundleni ngokuphelele aqukethe izakhi efanayo. Futhi, isiguli eningase nikhethe ontanga. Lezi yizidakamizwa eziwasebenzisayo enye into esebenzayo, kodwa umphumela ukulungiswa etholwe okufanayo.
Ukuthaka imithi ngendlela nje kwaqondana ngokuphelele we ketshezi esebenzayo yilezi ezilandelayo: "Laksilak" noma "Livolyuk", "Lactusan" noma "Portolak". Omunye izindlela ethandwa kakhulu saziwa imithi "Duphalac".
Uma kuziwa ontanga, le izingoma yilezi ezilandelayo: "Gutasil" noma "Gutalaks", "Senade" noma "microlax". I esikhundleni ethandwa kakhulu nabanye eselaphayo izimali zokuqala isibe izidakamizwa "Glitselaks" noma "Glycerine amakhandlela."
A ukusetshenziswa indlela yokulungiselela yasekuqaleni futhi lokunye ingehluka. Yingakho kudingeka ufunde ngokucophelela imiyalelo ngaphambi nekutijabulisa. Uphenyo odokotela babike ukuthi kufanele uqale nge umthamo ubuncane imithi. Lokhu kuzokusiza ukugwema isidingo lemiqulu emikhulu "lactulose" kanye nozakwabo zayo esikhathini esizayo.
izindlela Okokuqala okunikezwe umthamo namamililitha ngelanga 15 190. Ukusetshenziswa Ukwakheka senziwa kanye. Kungcono ukuba bafeze zokukhwabanisa ekuseni, ngesikhathi sakusihlwa kuqala. Kuye uhlobo izimpawu zokugula nomuthi ingasetshenziswa njengendlela yesikhathi esisodwa futhi isikimu. Indlela yokugcina ikhethwa ngamunye futhi kuncike ezintweni eziningi.
Njengoba aqokwe kokulungisa indlela "Lactulose" izingane? Izingane ngokushesha emva kokuzalwa iminyaka engu-6 ubudala Ukwakheka etuswa umthamo namamililitha 5 kuya ku-10. Okudala Kiddies izidakamizwa aqokwe ngaphansi 10-15 namamililitha. Ubude besikhathi sokwelashwa kunqunywa udokotela.
Izimo futhi side effects izidakamizwa
Medicine "Lactulose" (isiraphu), analogs futhi esikhundleni ngokuphelele kungukuthi inikezwa ngozwelo ngabanye ukuba ingxenye. Futhi, izidakamizwa is contraindicated ku galactosemia.
Kwezinye izimo, ukusetshenziswa imithi kungase kuhambisane ukubuyisa, ubuhlungu besisu, ukucanuzela kwenhliziyo noma ukuhlanza. Lapho ukusetshenziswa ngokweqile futhi ukwehluleka ukuhambisana umthamo esabelwe, amathuba wokuthuthukisa sohudo. Nokho, lesi sici siphela ngokuzimela ngosuku lwesibili khansela ukulungiswa. With ukuthuthukiswa komzimba yanoma yiluphi uhlobo kufanele afune usizo lodokotela.
Kuyini ewusizo kangaka asebenzayo imfuyo okuchazwe izidakamizwa analogs yayo? Lactulose - isakhi esiyingqayizivele. It is hhayi angena egazini, ngakho-ke bangeke ezithinta impilo yabantu. Yingakho wagunyaza ngisho izinsana futhi omama abakhulelwe.
Umuthi futhi analogue yayo hhayi kuphela lokulawula wokugaya ukudla, kodwa futhi kuthinte microflora ayo. Ngakho, ama-bacterium ezinhle labo abazokwazi ephonsa lactulose. Lokhu imvelo sisihle ngabo. Lesi sidakamizwa sisiza ukucindezela microflora pathogenic, ekuqedeni yokubola kwamazinyo elibi. Kuphela ngesikhathi izigaba zokuqala nomphumela ophambene kungabonakala nasemkhakheni ukulungiswa.
Umuthi ngokuvamile elibekelwe izingane abangakwazi ibhodlela. Ngakho izingane imithi kuyasiza azivumelanise ekudleni esikhethiwe futhi ugweme izinkinga ukugaya.
Izidakamizwa "Lactulose" Izibuyekezo muhle ezimweni eziningi. kwamiswa imicabango yabantu Negative kuphela kulabo abathengi abaye bawephula yokusetshenziswa futhi baqamba wasebenzisa izidakamizwa. On analogue of the ukwakheka "Lactulose" wawubumba Izibuyekezo ezingezinhle ngenxa izindleko ezibizayo. Ngakho, umuthi wokuqala uyobe abiza ruble mayelana 300. Nakuba Analogue yayo othandwayo "Duphalac" kubiza cishe kabili.
Yini izindlela "Lactulose" nozakwabo eshibhile? Kuthiwani ukwakhiwa okunjalo kunodokotela uthi? Abadayisi kwemithi libike ukuthi analogu ezingabizi kakhulu futhi eshibhile of izidakamizwa yokuqala kukhona "amakhandlela Glycerine." Nokho, nempahla yabo asebenzayo ngenye indlela. Phakathi ngokuphelele akukho analogue kwemithi eshibhile.
Iziguli usebenzisa lokhu izidakamizwa, babika ukuthi cishe akalokothi abangele ukusabela okungekuhle. Nokho, ngenkathi ukusetshenziswa kwemithi elwa namagciwane nge ukusebenza yayo kungancipha. Zonke ngenxa yokuthi kuhlanganisa ne zinemiphumela efanayo kuthinte Amagciwane hhayi kuphela, kodwa futhi uqede izilokazane ezincane ezuzisayo.
Iziguli bathi isenzo izidakamizwa ngokuqukethwe lactulose kuza ngemuva kwamahora ambalwa. Lokhu izidakamizwa phansi kunabaphostoli isihlobo ukuba abanye ontanga yayo. Ngokwesibonelo, umphumela "microlax" noma "Glitselaksa" imizuzu obonakalayo ngaphakathi ezinhlanu. Naphezu kwalokhu, izidakamizwa kuyakhethwa njengoba kuchazwe ukwelapha kodokotela emhlabeni wonke. Lokhu kungenxa yokuthi kuphephile. Kuwufanele ukukhumbula ukuthi in iziguli ukungabekezelelani ngabanye sokuqanjwa hhayi kuphela kungasizi, kodwa umonakalo.
Ufunde ukwakheka ngempumelelo nakahle onesihloko esithi "Lactulose". analogs Kwalo esikhundleni ethulwa ukunakwa kwakho kulesi sihloko. Labo noma nezinye ukwakhiwa kukhona umuthi wokwelapha uma kungekho kungenzeka ngokusebenzisa izidakamizwa umzali. Nokho, ngaphambi kokuba esikhundleni kuyadingeka ukuze ubonane onguchwepheshe. Ngemva ekuchazeni kabi imithi kungaholela side effects noma eziya ziba zimbi kwesimiso lesiguli. Thenga izidakamizwa esikhundleni sabo kuphela Izitolo ezikhethekile ukugcina imigomo nemibandela isitoreji. Mpilonhle!
Sulfuric wamafutha: yokusetshenziswa
I-ejenti elwa namagciwane "Furatsilinom" - yokusetshenziswa
"Menorah plus": ukubuyekezwa odokotela nabesifazane
Umlingisikazi Hilari Suenk: Biography, Filmography, izithombe
Indlela ukususa izinombolo zekhasi eZwini izinguqulo ezahlukene?
Kiss lokuqala, noma kanjani ukuba siqonde lokho guy ofuna ukukuqabula?